UPearl Shongwe ulambele okukhulu kwezokusakaza
Fanelesibonge Bengu | August 30, 2020
UPearl uqale ngesonto eledlule kwiDaily Thetha lapho ebambisene khona noNicolette Mashile noMelody Miya.
“Ithelevishini yiyona nto engayithanda kuqala futhi kuzohlala kunjalo. Yize kunjalo nomsakazo wangithola ngingalindele futhi angiziboni ngiphila ngaphandle kwawo. Kungcono ngikwenze kokubili ngoba yizinto ezimangalisayo futhi ngisalokhu ngicija ikhono lami khona,” kusho uPearl.
Uqhube wathi kwiDaily Thetha uza namava akhe kwezokusakaza futhi uyabathanda abantu.
“Ngizimisele ngokufunda nokukhipha ulwazi enginalo. Uhlelo luyaziwa futhi ngithemba ukwakhela phezulu kwalokho,” kuchaza uPearl.
Le ntokazi eke yethula iMorning Live kwiSABC2 ngempelasonto ne-One Day Leader kwiSABC1, ingena noMo Flava ohlelweni lwasekuseni phakathi nesonto kwiMetro FM.
“Angizimisele ngokunethezeka futhi lokho kungena nakuyo yonke into engiyenzayo. Sengathi ungahlala uthola okungaphezulu ngakho ngizibona nginohlelo lwami lomsakazo. Okwamanje ngisagxile ekukhuleni nethimba enginalo.Yimina omncane (ngokweminyaka namava) futhi ngihlale ngibheka kubo ukuthi bangikhombise indlela, ukuthi bangitshele ukuthi ngenze kanjani nokuthi bangigqugquzele.”
UPearl ozichaza njengentombi kayise uthe ungowesifazane onamaphupho amakhulu.
Ugqugquzele nabanye abesifazane ukuthi bangakuvumeli ukucindezelwa kodwa benze noma yini abayifunayo.
“Khumbula ukuthi ungubani ngaphambi kokuthi umhlaba ukutshele ukuthi kumele ube ngubani ukuze wamukelwe. Umhlaba yindawo enonya futhi engaphephile kubantu besifazane ngakho ngiyathemba ukuthi uyazithanda futhi uyazihlonipha.”